Paikady sy fanamby mankany amin'ny marketing amin'ny fialan-tsasatra amin'ny vanim-potoanan'ny Covid | Martech Zone
Ny fotoana manokana amin'ny taona dia eo akaiky eo, ny fotoana hiandrandrantsika miala sasatra miaraka amin'ireo olon-tiantsika ary indrindra manaram-po amin'ny fividianana fialantsasatra fialantsasatra. Na dia tsy mitovy amin'ny fialantsasatra mahazatra aza, amin'ity taona ity dia miavaka noho ny fanakorontanana mihatra amin'ny COVID-19.
Raha mbola sahirana manerantany hiatrika an'ity tsy fahatokisana ity sy ny fiverenany amin'ny laoniny izao tontolo izao dia maro ny fomban-drazana amin'ny fialantsasatra no hahatsikaritra fiovana ary mety ho hafa noho ity taona ity satria ny lafiny nomerika amin'ny fankalazana ireo fialantsasatra ireo dia manana endrika vaovao.
Fety lehibe erak'izao tontolo izao
Source: Torolàlana momba ny fivarotana fialantsasatra MoEngage
Fanamby amin'ny fivarotana fialantsasatra amin'ny taona 2020
Tamin'ny taona 2018, ny varotra tamin'ny fetin'ny fialantsasatra sy ny e-varotra dia nihoatra ny tapitrisa tapitrisa dolara marika voalohany indrindra. Na dia mety ho miadana aza ny varotra amin'ity taona ity fa ny fananana paikady sy fantsona mety dia mety hanampy ny marika hanosika ny vokatra amin'ny alàlan'ny fantsona nomerika.
Raha any Etazonia sy Eropa - malaza ny zoma mainty, ny alatsinain'ny cyber ary ny varotra Noely sy Taom-baovao; any Azia atsimo atsinanana sy India - Diwali, 11:11 [Fivarotana andro tokana] (Novambra), Harbolnas (Desambra), ary ny zoma mainty no manjaka amin'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny fiovan'ny lamina fanjifana, ny safidin'ny mpampiasa ary ny fahefa-mividin'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny, ny marika dia mila manova ny paikadim-barotra amin'ny fialantsasatra mba hamaly ny filàna vaovao. Ireto ny sasany amin'ireo fanamby ateraky ny areti-mandringana izay mety hanakana ny fahatsoran'ny Marketing amin'ny Holiday:
Mahatsiaro tena ho sarobidy ny mpividy: Ireo mpanjifa indrindra ireo an'arivony taona dia nanova ny fahazarany mandany ary lasa nifindra ho mpanangona. Ireo mpanjifa dia ho malina saina kokoa ary tsy hamporisika azy mandritra ny fiantsenana.
Olana amin'ny famoahana rojom-bidy: Miaraka amin'ny fanidiana sy ny famerana ny fivezivezena manerana ny tany, dia voa mafy ny logistika ho an'ny indostrian'ny mpivarotra. Tamin'ny volana aprily, ny varotra antsinjarany tany Etazonia dia nidina 16.4% 3 noho ny olana ara-pamokarana. Ny olana toy ny tsy fahampian'ny asa, ny fameperana ny fitaterana ary ny fanidiana ny sisintany dia nanampy trotraka ny fahasahiranana amin'ny fitaterana maharitra.
Fanoherana ny fivarotana in-store: Mitandrina ny olona ary tena manokana momba ny fandehanana any amin'ny magazay. Ny fiantsenana nomerika sy an-tserasera dia naka ny hafainganana. Na ny marika aza dia manaiky io fironana io ary manolotra fihenam-bidy mavesatra ho an'ny fiantsenana an-tserasera mitazona ny fiarovana ny mpanjifa hatrany.
Paikady fialantsasatra hiverina
Ny fialantsasatra dia matetika manodidina ny fihetsem-po sy ny fifandraisan'olombelona. Mila ampiana marika ireo zing fanampiny amin'ny paikadin'ny serasera mba hahatonga ny mpanjifa hifikitra amin'ny vokatra. Araka ny a fandalinana nataon'ny Ivon-toeram-panjakan'ny United Kingdom miorina amin'ny Fampiroboroboana ny dokambarotra, fanentanana misy atiny ara-pientanam-po tanterahina indroa ary koa ireo izay tsy manana afa-tsy atiny mirindra (31% vs. 16%). Amin'ny maha mpivarotra anao dia mila mahazo antoka ianao fa mifantoka amin'ny fifaliana, fiarahana ary fankalazana ny fampielezan-kevitrao. Ireto misy paikady vitsivitsy alain'ny marika:
Fampiroboroboana ny fifandraisan'ny pick-up curbside: Fanaterana tsy misy fifandraisana no lakilena; manantena ny marika ny mpanjifa izay mandray fepetra fiarovana tsara indrindra amin'ny farany izay manangana ny fitokisana ihany koa. Ny fitsangatsanganana an-tsokosoko dia ho goavana amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity hisorohana ny firohotana ao amin'ny magazay sy ny laharana fiandrasana.
Mifantoha amin'ny varotra finday - Araka ny Adobe ny 2019 Holiday Recap, 84% amin'ny fitomboan'ny e-varotra voatanisa amin'ny vanim-potoana fialantsasatra any Etazonia dia natao tamin'ny alàlan'ny smartphone. Ny fanentanana mifantoka sy ny tolotra ifotoran'ny toerana dia afaka mampitombo ny fifamatorana ho an'ny marika ary amin'ny farany ny varotra.
Fifandraisana mampihetsi-po: Tsy misy atidoha io ary tsy maintsy atao. Mila mifantoka amin'ny fihetsem-po ny marika ary misoroka ny varotra mivantana ary ho malina amin'ny fandefasan-kafatra. Mila mamerina ny firaisankina amin'ireo mpanjifa izy ireo ao anatin'ny fotoan-tsarotra.
Mifantoha amin'ny Digitization: Ny fananganana fantsona nomerika no safidy miharihary ho an'ireo mpivarotra antsinjarany. Ny fivarotana antsinjarany an-tserasera dia avo kokoa tamin'ny volana Jona raha oharina amin'ny salan'isa talohan'ny pandemika tamin'ny volana feb.
Mankanisa mpampiasa misimisy kokoa amin'ny fampandrenesana Push namboarina: Mahazo fampandrenesana 65 mahery ao anatin'ny iray andro ny mpampiasa antonony! Ny marika dia mila miady amin'ny ady sy ny lalao fampandrenesana manosika azy ireo. Aza avela ho very ao anaty lovia fampandrenesana ny fampandrenesanao, miavaka amin'ny fampandrenesana manan-karena sy manokana izay sarotra ny tsy hahita.
Ny fanatsarana ny paikadim-barotra amin'ny finday mialoha sy amin'ny fampiharana ny fomba omnichannel dia mety hanampy amin'ny fampitomboana bebe kokoa ny fandraisana andraikitra miaraka amin'ny fanolorana fihenam-bidy sy vidiny lehibe ho an'ny mpanjifa. Ny fandrindrana sy ny fanaingoana dia handresy be amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity. Avelao hanomboka ny fihobiana amin'ny fialantsasatra!
Sintomy ny Torolàlana momba ny Marketing amin'ny Holiday Holiday MoEngage
Tags: 11: 11KrismasyCovid-19pick-up curbsidedigitizationjeografia manerantanyhabolnastorolàlana momba ny varotra fialantsasatravanim-potoana fialantsasatrafinday-barotrapaikady marketing amin'ny findayfandrianageLahatsoratra-covidfanindriana fampandrenesanaantsinjaranyfialantsasatra atsinanana atsinanana